GeoGebra: အဆင့်အားလုံး၌ပညာရေးဆိုင်ရာသင်္ချာဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ Linux မှ
GeoGebra - အဆင့်တိုင်း၌ပညာရေးဆိုင်ရာသင်္ချာဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ
ဤသည်လက်ရှိကာလ၌, အထူးသဖြင့်ကာလအတွင်း Covid-19 ကပ်ရောဂါ, အရာ၌ သင်ကြားခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်များ အပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းများလိုအပ်သည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခမဲ့၊ ပွင့်လင်း။ (သို့) ၎င်းတို့အားလွယ်ကူချောမွေ့စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ စိတ်ဝင်စားသူများကိုဖုန်းခေါ်နိုင်သည် GeoGebra.
လျှောက်လွှာ free software GeoGebra, အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည် သင်္ချာareaရိယာအထူးသဖြင့်ရန် ပညာရေးကဏ္ဍ သူကဘာသာရပ်များအတွက် tools များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးကတည်းကအဆင့်အားလုံးမှာ ဂဏန်းသင်္ချာ, ဂျီသြမေတြီ, algebra, ကဲကုလနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပါအဝင် စာရင်းအင်းအရင်းအမြစ်များ.
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည် GeoGebra ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ထို့နောက်အသုံးပြုပုံကျနော်တို့အောက်ပါအပေါ်မှတ်ချက်ပေး:
"GeoGebra သည်ရွေ့လျားနေသောဂျီသြမေတြီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် point များ၊ segments များ၊ line များမှတည်ဆောက်မှုများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဂျီ ometric မေတြီဖော်မြူလာများအားထပ်မံဖန်တီးရန်နှင့်၎င်းအားလိုချင်သောအယူအဆများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာသင်ကြားရန်နှင့်၎င်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရပ်တန့်မထားဘူး, အလားတူပြောင်းလဲနေသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းကဲကုလနှင့်အက္ခရာသင်္ချာကိုကိုင်တွယ်သည်".
1 GeoGebra အကြောင်း
2 GeoGebra: သင်္ချာဆိုင်ရာအသုံးချမှုများမြောက်မြားစွာကိုပေးထားသည်
2.1.2 ဝဘ်မှ (နောက်ဆုံးရ - ၅ နှင့် ၆)
သို့သော်ယနေ့အတွက် GeoGebra အပိုင်းအကြောင်း သူ၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၎င်းကိုဖော်ပြထားသည် -
"GeoGebra သည်ပညာရေးအဆင့်အားလုံးအတွက်သင်္ချာဆော့ဝဲဖြစ်သည်။ dynamically သည်ဂျီသြမေတြီ၊ algebra၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့်တွက်ချက်မှုများကိုဂရပ်ဖစ်၊ GeoGebra သည်အခမဲ့သွက်လက်သောအသုံးပြုမှုဖြင့်အရေးပါပြီးကြီးထွားနေသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုအတူတကွစုစည်းပေးသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌၎င်းကိုစိတ် ၀ င်စားသူသန်းပေါင်းများစွာကလက်ခံပြီး GeoGebra ဒီဇိုင်းများနှင့် application များဖြင့်မျှဝေသည်။ လေ့လာမှုကိုအားပြည့်စေပါ။ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာကိုဖြတ်ကျော်သော didactic နှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အယူအဆကိုသဟဇာတဖြစ်စေခြင်း (STEM: Science Technology Engineering & Mathematics) ။ အတူတကွစုပေါင်းလိုက်သောအသိုင်းအဝိုင်းသည်၎င်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသယံဇာတအရင်းအမြစ်အဖြစ်တိုးချဲ့သည်။ အဓိကနှင့်ဂန္ထ ၀ င်သင်ကြားရေးနှင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းအတွက်အလွန်ဆန်းသစ်သည်။ ”.
လက်ရှိတွင် GeoGebra အများဆုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှု၏သိုလှောင်ရုံသော်လည်း, surelyကန်အမှန်သာယုတ်ညံ့မူကွဲများသာ ဗားရှင်း ၅ သို့မဟုတ် ၆, အနေဖြင့် download လုပ်နိုင်ပါတယ် download အပိုင်း သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။
သို့သျောလညျး GeoGebra အဲဒါအသုံးဝင်တယ် multiplatform လျှောက်လွှာကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဆိုလိုသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ (ကွန်ပျူတာများ၊ လက်ပ်တော့များ၊ တက်ဘလက်များနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ) နှင့် လည်ပတ်မှုစနစ်များ (Windows, Mac, Linux, Android, iOS) ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုaမှတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည် web browser ကို၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည် ဘာသာစကားများစွာနှင့်ပါဝင်သည် အစွမ်းထက်ကိရိယာများ တစ် ဦး နှင့်အညီ အလိုလိုသိနှင့်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ interface ကို.
အောက်ပါ command ကိုသာလုပ်ရမည်
ဝဘ်မှ (နောက်ဆုံးရ - ၅ နှင့် ၆)
တစ်ချိန်က download နှင့် unzipped ဥပမာအားဖြင့်လက်ရှိအမည် - ဗားရှင်း ၆ အရင်းအမြစ်ဖိုင်။GeoGebra-Linux64-Portable-6-0-579-0»ခေါ်သော application executable သည် Terminal (Console) မှတဆင့်စီရင်ရမည်။ "GeoGebra", root အသုံးပြုသူနှင့် option ကိုအဖြစ် "--no-sandbox" အမှု၌လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ထို command command များနှင့်အတူတိုက်ရိုက် link တစ်ခု (menu ထဲမှတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်း) ကို၎င်းကို graphical တွက်ချက်ရန်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့အဲဒါကိုအသုံးပြုပြီးဒီကိရိယာရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအလားအလာအားလုံးကိုသာခံစားနိုင်မှာပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် အခမဲ့ဆော့ဝဲ application «GeoGebra»သောအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သော သင်္ချာareaရိယာအထူးသဖြင့်ရန် ပညာရေးကဏ္ဍ သူကဘာသာရပ်များအတွက် tools များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးကတည်းကအဆင့်အားလုံးမှာ «aritmética, geometría, álgebra, cálculo y análisis»အပါအဝင် စာရင်းအင်းအရင်းအမြစ်များ; အများကြီး အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GeoGebra - အဆင့်တိုင်း၌ပညာရေးဆိုင်ရာသင်္ချာဆိုင်ရာလျှောက်လွှာ
Qt Creator 4.12 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်
Dism ++: DISM GUI အတွက် open source လျှောက်လွှာ